Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Fe-potoana vaovao | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Fe-potoana vaovao
Orana iny tamin’ny asabotsy alina iny. Izay vao tena mivatravatra ny toetr’andro araky ny maha fahavaratra azy. Tso-drano moa no filaza ny firotsahan’ny orana rehefa mifanandrify amin’ny fisantarana zava-baovao. Tsy hita ho adinoina anefa fa ity fe-potoana izay antenaina fa hisehoan’ny fiovana dia tsy fotoana fiandrasana fotsiny fahagagana. Toy ny vary, tsy fotsy ho azy raha tsy misy miezaka mitoto ny akotry sy manofa ny ampombo ary avy eo mbola mitsimpona ny voan’ahi-dratsy. Toy izany koa ny fanasana lamba, tsy madio raha tsy atao tsara kosoka ny loto. Misy ezaka izany andrasana avy amin’ny olona rehetra mba ho tanteraka ilay fiovana. Ao moa ny sori-dàlana faritan’ny mpitarika izay mifehy ny fanatanterahana ny asa. Voalohany voakasik’izany dia ny asa sy adidy anjara miankina amin’ny fanjakana, fa ny olon-drehetra na olom-pirenena na vahiny mipetraka na mandalo dia samy manana ny anjarany avokoa na eo amin’ny lafin’ny fanarahan-dalàna fotsiny sy eo amin’ny fanajana ny fombafomba na ireo tsy voasoratra aza mipetraka ho fandravonana ny fiarahamonina. Tsy vitan’izay anefa. Tsy misy tsy mitaraina momba ny fiovan’ny toe-tsaina. Amin’izany, ny sasany hatrany anefa no hany ampangaina ho ratsy toetra, ratsy loha, ratsy saina… Izay miteny toa olo-masina avokoa. Ho fanoherana izany anefa dia diso ny fiheverana fa ratsy daholo ny olon-drehetra. Ny vahaolana angamba dia samy mitsara tena, mba ahafahan’ny tsirairay manarina ny toe-tsainy.
Ny fomba fiainana manaraka ny lalànam-piainana ankehitriny anefa dia mirona hatrany any amin’ilay filazana hoe «samy mandeha samy mitady». Eran-tany dia efa izay toe-tsaina izay no mahazo bahana tonga hatramin’ny fitenenana «ny fihantrana tsara indrindra dia manomboka amin’ny fitsinjovana ny tena» (charité bien ordonnée commence par soi). Misy ny fahamarinan’izany, ahoana tokoa moa no ahafahana hamonjy ny hafa raha ny tena aza tsy vita? Samy mahatsapa fa miha mareforefo hatrany ny firaisan-kina raha vao ivelan’ny tokantrano na eo amin’ny fianakaviambe izany na eo amin’ny firaisana tanàna na eto amin’ny fiombonana tanindrazana.
Nefa misy lalandava ny fifamatorana. Misy antony matoa mitsangana izany hoe fanjakana izany. Eo amin’io sehatra io no mipetraka ny fanontanina mikasika ny adidin’ny tsirairay. Miankina amin’ny fahaiza-manaon’ny tompom-pahefana mitantana ny fanjakana, fa arakaraky ny zoto sy tanjaky ny mponina ary ny tsirairay ahafahany miezaka mandroso sy mamokatra eo amin’ny toerana misy azy, no ahitan’ny firenena fisondrotana sy hitarika ny rehetra any amin’ny fandrosoana.